Phyu Phyu Thin Sympathizer: Daw Suu and postcards
at 8:28 PM Labels: General news
to support to AIDS Patients
written by ayeraung, December 08, 2010
I want to buy very very strongly for DAW AUNG SAN SU KYI's paintings(Post cards) to support to AIDS patients,Very good plan.
အမြန်ဝ ယ်ပြီး လှူချင်ပါသည်
written by en, December 07, 2010
အမေ ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကား ပို့စကဒ် တွေကို ၀ယ်ယူအားပေးဘို့ စောင့်ေ နပါတယ်။
written by kobala, December 07, 2010
ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့က NLD ရုံးချုပ် ဝေဒနာရှင်က လေး များကြားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို တွေ့ ၇တာ
လေးစားဂု ဏ်ယူမိတယ် ။
နိုင် ငံ့ခေါင်းေ ဆာင် လူထုခေါင်း ဆောင် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် အနုပညာရှင်အစသဖြင့်စသောသူေ တွဟာ သာမာန်ပြည် သူတွေအ တွက် သူ၇ဲကောင်း(Hero)တစ်ယောက် ပါ။ သူတို တွေအေ ပ်ါလေးစားယြုံ ကည်မှု နဲ အထင်သေးအယုံကြ ည်ကင်းမဲ့ ဆိုတာကလည်း;သူတို့ ၇ဲ့ပြောဆိုေ နထိုင် ပြုမူလုပ်၇ပ်ေ တွအပေါ် အသိစိတ် မသိစိတ် နဲ့နှလုံးသားက အလိုလို ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
အားလုံးချစ်ခင် လေးစားမြတ် နိုးအားပေးနေတဲ့ နိုင်ငံ့ခေါ င်းဆောင် လူထုခေါင်း ဆောင် ကျောင်းသားခေါ င်းဆောင် အနုပညာရှင် တွေအနေနဲ့အမေစု ကိုမင်းကိုနိုင် ကိုကျော်သူ တို့ လို အနစ်နာ မခံနိုင်၇င်တောင် ပြည်သူတွေ၇ဲ့ 
သူတို့ တွေအပေါ် ထားတဲ့ မေတ္တာကို တန်ဘိုးထားပေးပါ။
ခိုးကူး တွေ မထွက်အောင်လဲ----
written by မောင်သန်.။, December 06, 2010
အင်မတန် ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ် ပါဘဲ။
ခိုးကူးခွေ နဲ့ တင် ဂီတလောက၊ ဗီဒီယို လောက အတော် ခံစားသွားကြရပါတယ်။
ဒေါ်စု ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ အနုပညာ များ မို့ လို့ လည်း ဒေါ်စု ရည်ရွယ် သလို လူမှုရေး ရံပုံငွေ coffer ထဲဘဲ ၀င်ေ စချင်ပါတယ်။
ဒါကို စီးပွားရေး လောဘနဲ့တုပ မှု များမှ ကာကွယ် ဖို့လဲ သတိချပ်စေ ချင်ပါကြောင်း ဗျာ။
ဖြန့် ဝေမှု ကို အထူးသတိပြု စေချင်တာပါ။
အန်တီရဲ့ ရန်ပုံငွေအတွက် ပါဝင်ဖို့ အဆင်သင့်ပါ
written byုစပါယ်, December 06, 2010
We are ready to buy Aunty's postcards. Please press/print more postcards I will ask my friends to buy as well.
written by kogyi, December 06, 2010
ှကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကောင်းသော လုပ်ရပ်များ အတွက်..
သိချင်တာက.. NLD အနေနဲ့ ဘယ်လို ၀င်ငွေတွေနဲ့ ရပ်တည်ေ နနိုင်ပါသလဲ. .အခြား အထောက် အပံ့မရဘူး ဆိုတော့. .
၀ယ်မယ် အမေစု ရေ
written by War, December 06, 2010
၀ယ်မယ် အမေစု ရေ... ဘယ်လောက်နဲ့ ဘဲရောင်းရောင်း အင တ်ခံပြီးကိုး ၀ယ်ရမ ယ်။ ဘယ်တော့လောက်ေ၇ာင်းမှာလဲ မသိဘူး နော်...